သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ညောင်ရွှေကိုသွားရင်း ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ Hostelမှာနေကြမယ် 👭….. – YANGON STYLE
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ညောင်ရွှေကိုသွားရင်း ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ Hostelမှာနေကြမယ် 👭…..
စက်ဘီးတွေလဲ ဖရီးပေးထားတော့ အိုကေမှာစိုပြေ
( 2Night/3Days Giveaway Included 🎁👇🏻👇🏻👇🏻) စာကိုသေချာလေးဖတ်ပေးပါနော် ☺️
မိန်းကလေးသူငယ်ချင်း BFF ၃ ယောက်သား ခရီးကလဲ တူတူထွက်ချင်တယ်။ အဲ့တော့ ဘယ်သွားရမလဲ စဉ်းစားရင်း ပိုက်ဆံကလဲ အများကြီးမကုန်ချင်ဘူး 🤔 အဲ့လိုနဲ့ ညောင်ရွှေကို သွားဖို့ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာလို့ ညောင်ရွှေကို ရွေးဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ သဒ္ဓါတို့ အားလုံးက ကလော၊ အင်းလေး၊ တောင်ကြီး အကုန်ရောက်ဖူးပီးတော့ ကြားထဲက ညောင်ရွှေကို ချန်ခဲ့ကြတာများတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ညောင်ရွှေမှာလဲ လည်ပတ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဗျ 😨
ညောင်ရွှေဆိုတဲ့မြို့လေးက Foreigner တွေအရမ်းနှစ်သက်ကြတဲ့မြို့၊ နေရာတိုင်းမှာ Bar တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မြို့။ ပြီးတော့ backpacker Foreigner တွေအကြိုက် Hostel မျိုးစုံရှိတဲ့မြို့လေးပေါ့။ သဒ္ဓါတို့ အဖွဲ့လဲ Hostel တည်းမယ်ဆိုပြီး Baobabed Hostel ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဓိကက ဈေးသက်သာတယ်လေ 😁 ပြီးတော့ Jacuzzi, Roof top bar တွေပါတော့ အိုကေမှာ စိုပြေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက Hostel Culture ကတခြားနိုင်ငံတွေလောက် မဖွံ့ဖြိူးသေးတော့ Local တွေသိပ်မသိကြဘူး။ ဘယ်နေရာသွားသွား Hotel ကိုပဲ ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်။ သဒ္ဓါလဲ Hostel တွေကိုတည်းဖြစ်တာ တစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။
ကိုယ်က မိန်းကလေး တယောက်တည်း Solo trip တွေသွားရင် Hotel ဆို အခန်းကြီးကကျယ်လို့ သရဲကြောက်ပီး မနေရဲတာနဲ့ 🙄 စရိတ်လဲချွေတာချင်တာနဲ့ Solo trip တွေဆို Hostel ပဲရွေးချယ်ဖြစ်တယ်။
အထူးသဖြင့် ပြည်ပက ခရီးသွားအများစုက ရက်ရှည်ခရီးတွေသွားမယ်၊ ပြည်ပဆိုလဲ ပြည်ပအလျောက်၊ ပြည်တွင်းဆိုလဲ ပြည်တွင်းအလျောက် Long stay တွေနေကြမယ်ဆို Hostel တွေကိုပဲ ရွေးချယ်ကြတယ်။ Hostel မှာနေရင်း တစ်ယောက်တည်းလဲ ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး၊ ၄ ယောက်ခန်း၊ ၆ ယောက်ခန်း စသဖြင့် ကျား၊ မ ခွဲပြီး အခန်းတွေရှိတယ်။ Solo သမားတွေဆို မိတ်ဆွေအသစ်တောင်ရသေးတယ်။ Safe ဖြစ်မှဖြစ်ရဲ့လားဆိုပီး စိတ်မပူနဲ့နော် တကယ် Safe ဖြစ်ပါတယ်။ 🤗
Baobabed Hostel 👭
Hostel မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ Rooftop bar, Jacuzzi, Cafe, Snookerတွေရှိပါတယ်။ အော် ပြီးတော့ စက်ဘီးကလဲ freeနော်။နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ ညောင်ရွှေကို စက်ဘီးနဲ့ပတ်ပြီး လျှောက်လည်ကြတယ်။
ရောက်တာနဲ့ ပြေးထိုင်ကြတာ 😂
အခန်းတွေကတော့ Dormitory ၆ ယောက်ခန်း၊၈ ယောက်ခန်း စသဖြင့်ရှိတယ်။ Female, Male နဲ့ Mix အခန်းတွေရှိပါတယ်။ Private Room တွေလဲရှိသေးနယ်နော် 😊။ တည်းမယ်ဆို တစ်ယောက်ကို သော့တစ်ချောင်းနဲ့ Tower တစ်ခုစီပေးလိုက်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Luggage တွေ အသုံးအဆောင်တွေထည့်ဖို့လဲ ကုတင်အောက်မှာ သံဇကာလေးတွေ ရှိပြီးသား။ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ 😊 ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာတော့ Share သုံးရတယ်ဆိုပေမယ့် အဆင်ပြေပါတယ်။ ရေပူ၊ ရေအေးလဲရတယ်။ ရေချိုးဆပ်ပြာရည်လဲပေးထားတယ်။ Dryer တောင်ပါသေး။ သွားပွတ်တံတို့၊ မျက်နှာသစ်ဆေး စတာတွေကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ယူသွားရမှာပါ။ Solo သမားတွေဆို ပိုတောင်အဆင်ပြေသေး။ တစ်ထပ်စီမှာလဲ ကိုယ့် ကန်လန့်ကာနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ သီးသန့်လေးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။
ကိုယ်အိပ်တဲ့နေရာဘေးမှာလဲ ဖုန်းအားသွင်းဖို့ ပလပ်ပေါက်ကလဲ ၂ခုပေးထားပြီး ညအိပ်မီးလေးလဲပါတယ်။ တိုလီမုတ်စတင်လို့ရတဲ့ Locker လေးကလဲရှိသေး။
အခန်းတိုင်းမှာ အဲ့လို Quote လေးတွေရေးထားပေးတယ်
ဒါက private room ရဲ့ ဝရံတာ
Rooftop Bar 🍸🍺
၄ ထပ်တ်ုက်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာ ညောင်ရွှေမြို့ကို ထင်းခနဲမြင်ရမယ့် Rooftop bar လေးလဲရှိပါတယ်။ ဘီယာ၊ ဝိုင်၊ cocktail အစုံရပါတယ်။ အလည်မှာ အဖွဲ့လိုက် စကားပြောရင်းပဲထိုင်မလား၊ အပြင်ကိုမြင်ရတဲ့ နေရာမှာ တယောက်တည်းပဲ ဆွေးမလား Vibe ၃ မျိုးလောက် ရအောင် လုပ်ထားပေးသေးတယ်။ ညနေဆို အပေါ်က်ုတက် Chill, Foreigner မိတ်ဆွေတွေလဲရ၊ စကားတွေ ဗဟုသုတတွေ ဖလှယ်ကြရင်း သာသာယာယာပေါ့🥰
Breakfast ကို rooftop မှာစားမယ်
Rooftop ရဲ့ထောင့်မှာ Jacuzzi လေးလဲရှိတော့ ရေစိမ်ပြီး Sunset လေးကြည့် ဘီယာလေးသောက် 🌚 အမလေးနော် ဘဝကြီးက ပြီးပြည့်စုံလို့🤭 တခြားလူတွေနဲ့ရောမစိမ်ချင်ရင် လူရှင်းတဲ့အချိန် လာစိမ်လို့လဲရတယ်။ ည ၁၀ နရီမှ ပိတ်တာဆိုတော့ သဒ္ဓါတို့ဆို လူရှင်းမှ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လာစိမ်ရင်း အတင်းတုပ်ကြ ဟီး🌚
😝😝 အဆင်လေးတွေ စိမ်နေတာတွေ့ရင်လဲ ဈေးဗန်းခင်းရင်း ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ ဝင်စိမ်ပေါ့။ မိတ်ဆွေတိုးတာပေါ့နော့်😌😌
Jacuzzi မှာ chill
Chill Area 🧘🏻‍♀️
အပေါ်ဆုံးထပ်မှာပဲ Chill Area ဆိုပီး အခန်းလေးလုပ်ထားပေးသေးတယ်။ ကိုယ့်ပါကိုယ် သီးသန့်နေချင်တဲ့သူတွေ၊ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ၊ အေးဆေးနေချင်တဲ့သူတွေအတွက် တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာလဲထားပေးထားတော့ ကိုယ့်ပါကို ဝိုင်ပုလင်းလေးသယ်လာ ထည့်ပီး အေးအေးလေးသောက်။ စာအုပ်လေးဖတ် အို အဆင်ကိုပြေနေရော။ အဲ့လိုမနေချင်ဘူး ဂိမ်းတွေဆော့မလား? ရသေးတယ်နော် 🤗 Uno, အင်္ဂစာလုံးဆက်တဲ့ဂိမ်းတွေရော တခြားဂိမ်းတွေပါထားပေးထားတယ်။ Bean Bag seat လေးတွေလဲရှိတော့ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ အေးဆေးchill 😊
အေးဆေး သီချင်းလေးနားထောင်ပီး chill
အောက်ဆုံးထပ်မှာ Reception, Cafe & Snooker ရှိပါတယ်။ အော် Coffee & Tea Free Flow 🌚
အဲ့ဒါကတော့ ကိုယ့်အကြိုက်ပေါ့ 😁 တစ်နေကုန် ကော်ဖီသွားသောက်နေလဲရတယ် ဟီး။ အောက်ထပ်မှာ ဘိလိယက်လေးထိုးမလား? ကော်ဖီလေးပဲသောက်မလား အေးဆေးနေလို့ရတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ Spotလေးတွေလဲရှိတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေဆက်ဆံရေးကလဲ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဈေးနေ့တွေရှိရင် သူတို့နဲ့လိုက်ချင်ရင်လဲ ခေါ်သွားပေးတယ်။ ညောင်ရွှေမှာ ဘယ်နေရာတွေလည်ရမလဲ၊ ဘယ်တွေ သွားလို့ကောင်းလဲ အကုန်ပြောပြပေးတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ချို့ Barတွေသွားမယ်ဆို Discount ကဒ်လေးတွေပေးတယ် 😁
Room Rate 🤗
Dormitory Room တစ်ဦး – 13000
Private room – 35000, 45000
တစ်ယောက်ကို ၁၃၀ဝ၀ နဲ့တန်လွန်းပါတယ်။Breakfast , Wifi အကုန်ပါပြီးသား။Solo သမားတွေအတွက်ရော၊Budget သမားတွေအတွက်ရော ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဒီလို Service တွေပါတဲ့ Hostel မျိုးမှတ်ထားသင့်တယ်နော်။Hostel နေရင်း အင်္ဂလိပ်စကားလဲ ပိုကြွယ်သွားနိုင်ပါတယ် 😂 ဘိုလိုတွေမှုတ်ကြရင်း ပျော်စရာကြီး။ လုံခြုံမှုလဲရှိတော့ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ အကုန်ဖော်ရွေကြပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပေါ်ထပ်၊ အောက်ထပ်စုနေရင်း ခင်မင်မှူလဲပိုတိုးပါတယ်။ ပိုပြီးလဲပျော်ရပါတယ်။ အမြတမ်း Hotel တွေပဲတည်းနေမယ့်အစား Hostel Vibe ကိုတစ်ခါလောက် မြည်းစမ်းသင့်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆို Night Out ပြီးအိမ်မပြန်ချင်ရင် ဒီလို Hostel တွေမှာအေးဆေးသွားနေလို့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်၊ ပုဂံ၊ညောင်ရွှေမှာ Baobabed Hostel တွေရှိသေးတယ်တဲ့။ မန်းလေးမှာဖွင့်တော့မှာလို့လဲကြားတယ်။ ကိုယ်တွေလို Budget backpacker သမားတွေအတွက်တော့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Baobabed Hostel ရဲ့လိပ်စာကဒ်ကို အောက်မှာထည့်ပေးထားတယ်နော်။
ညောင်ရွှေရောက်တာနဲ့ Baobabed ကိုသွားမယ်လို့သာပြောလိုက် carry သမားတိုင်းသိတယ်။
✔️Hotel မဟုတ်တဲ့အတွက် အထုပ်သယ်ပေးမယ့်လူမရှိပါဘူး။ ကိုယ့် Luggage ကိုယ်ဆွဲပြီးသွားရမှာပါ။
✔️ရချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ Bathtub တွဲလျက်မပါပါဘူး။
Dormitory တစ်ခုစီတိုင်းမှာ shareသုံးရတာပါ။
✔️ Hotel တွေလို ထမင်း၊ဟင်းတွေမရပါဘူး။
Light foodများ နဲ့ ထမင်းကြော် ခေါက်ဆွဲကြော်များသာရနိုင်ပါတယ်။
✔️ အသံတိုးတိုးပဲနေပါနော်။ သူများတွေနဲ့ပေါင်းနေရတာမလို့။ အဲ့လိုမနေချင်ရင် Private room နဲ့နေလို့ရပါတယ်။
Baobabed hostel၂ညအိပ်/ ၃ရက် ခရီး ၃ ယောက်စာ Giveaway မှာပါဝင်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်👇🏻👇🏻👇🏻
(1) https://www.facebook.com/BaobaBedNyaungShwe/ ဒီ Page ကို Like လုပ်ပေးပါ။
(2) ဒီ Post လေးကို Public နဲ့ LIKE & SHARE လုပ်ပေးပါ။
(3) #TDTravelNotes #BaobabedHostel ဆိုပြီး Hashtag တွဲရေးပီး ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ကို Tag လုပ်ပါ။
(4) Share ထားတဲ့ Ss ကို comment မှာမန့်ပေးပါ။
(5) 9.10.2019 ကျရင် Giveaway ပေါက်တဲ့သူကို ကြေငြာပေးပါ့မယ်။
၂၀၁၉ မကုန်ခင်အထိ ခရီးသွားကာလကို သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
(Transportation & Accommodation Included)
အားလုံးပဲ စရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ခရီးသွားနိုင်ကြပါစေရှင့်🤗